Shinoa Mpanakanto Tratry Ny Sivana Noho Ny Famarotana Ny T-Shirt Ai Weiwei · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Mandy Wong
Voadika ny 06 Avrily 2015 5:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Français, čeština , عربي, Español, Italiano, 繁體中文
Akanjo ambony maivana namboarin’I Wu, afaka jifaina manombika izao ao amin’ny corlectionstore.com
Ity no ampahany iray amin’ny endriny tsy mitongilana tamin'ilay tafatafa niarahana tamin’I Wu Tun, tompona varotra an-tserasera iray Taobao noterena nakatona tamin’ny volana Novambra 2014. I Yi Que Tang no niandraikitra ilay tafatafa ary navoaka voalohany tamin’ny teny Shinoa tao amin’ny pao-pao.net tamin’ny 10 Febroary 2015. Nadikan’i Mandy Wong ny dikanteny Anglisy ary naverina navoaka teto teo ambanin’ny fiaraha-miasa amin’ny Global Voices.
Tamin’ny Novambra lasa teo, voatery “nanakatona nandritra ny fotoana maharitra” ny fivarotany T-shirt tao amin'ny Taobao i Wu Tun izay artista 28 taona, raha toa kosa ireo mpivarotra sasany nankalaza fahombiazana ara-barotra tsy nisy toy izany teo amin’ny sehatra fivarotana amin’ny aterineto, Taobao, ny mpanjinjara sasany. Tapaka tampoka ny làlan’i Wu, taorian’ny efatra andro nahalafosany T-shirt 10, noho ny T-shirt iray izay maneho rindrina vita biriky ahitana soratra hoe “愛 Tsy Afaka Ho Eto” eo amboniny. Midika hoe “fitiavana” ilay soratra Shinoa – ny dikasorany, “Ai.”
Namorona endrika T-shirt tsotra iray i Wu ho ampahany amin'ilay hevitra hoe Tsy Afaka Ho Eto Ny Ai (Fitiavana), hetsika an-tserasera iray maneho ny fanohanany an’i Ai Weiwei, ilay mpanakanto mpanohitra iray, malaza eran’izao tontolo izao, izay ambenana fatratra Shina ao amin’ny trano voatokana nanomboka tamin’ny 2011. Hoy i Wu “Nanapa-kevitra ny hanohana sy handray anjara tamin’io aho raha vao naheno ny momba izany”, “Nieritreritra aho fa hoe teny an-kolaka mba hanohanana an’i Ai Weiwei izany ary tsy nanam-po fa ho hitan’ireo manampahefana amin’ny sivana. Mahatonga ny fisian'izy roa, Ai (Ai Weiwei) ary ai (fitiavana), tsy ho tanteraka ny tontolo ara-politika saropady misy”
Kanefa tsy nitsahatra nanohana an’ Ai Weiwei i Wu. Tapa-kevitra ny hanohy ny fivarotana T-shirt izy.
Notazonin’ny polisy nanomboka tamin’ny 2011 ny pasipaoron’i Ai, hany ka tsy afaka mandeha any ivelany izy. Antenaiko fa afaka hisarika bebe kokoa ny sain'ny olona momba ny mahazo azy ny ezaka nataoko. Ataoko ihany koa io ho an’ny tenako. Noterena nakatona noho ilay t-shirt ny tsena an-tseraserako. Mbola te-hanamboatra ilay t-shirt aho ary mitady fivarotana vonona ny hamarotra azy ireo.
Namorona pejy tao amin’ny Indiegogo i Wu, ilay sehatra faharoa lehibe indrindra mahazo fanohanana ara-bolan'ny vahoaka ao Etazonia, miaraka amin’ny filazalazana momba ny tetikasa sy lahatsary fampahatantarana. Tsy nosakanan’ny Great Firewall ilay tranonkala, araka izany dia afaka jerena ao amin'ny tanibe Shina ny votoatiny. Fa tsy afaka jerena kosa ilay lahatsary, izay napetraka tany amin’ny YouTube.
Maniry I Wu mba ho afaka jeren’ny mpiserasera Shinoa maromaro ilay lahatsariny satria manazava ny ahiahiny sy ny fanohanany an’i Ai Weiwei izany ary mitsikera fampiharana ny sivana atao amin’ny aterineto ao amin'ny tanibe Shina. Indray alina tany am-piandohan’ny volana Febroary, nandefa ilay lahatsary tao amin’ny Youku izy, toy ny YouTube ao Shina, ary nanantena fa hijanona elaela kokoa ilay lahatsary raha nalefa tamin’ny alina ka hahatratra olona bebe kokoa. Kanefa ny ampitso maraina, hitany fa voafafa ilay lahatsary .
Tezitra i Wu, vavolombalona manatri-maso hatrany fa lasa tena mihahenjana kokoa ny sivana:
Ao anatin’ny andian-taranaka talohan’ny 1985, nanomboka nampiasa ny aterineto somary taloha kelin’ireo olona hafa aho. Nanomboka nitady zavatra tao amin’ny aterineto aho fony aho mpianatra ambaratonga ambony tamin’ny 1999. Tamin’izany, zavatra toy ny mozika, lamaody, lalao, ary ireo zavatra hafa nahaliana ny tanora tamin’izany no notadiaviko. Tampoka teo, maro be ny tranonkala nobahanana noho ny antony tsy fantatra. Taty aoriana, fantatro fa niasa tao ambadik’izany i Fang Binxing (Mpitantana ny “Great Firewall tao Shina”) sy ny GFW azy. Alaivo sary an-tsaina ny hoe mampiasa VPN hamakiana “rindrina” mba hijerena lahatsary fotsiny. Tantara mitovy amin'izany ihany ny fanidiana ny tsenako tao amn'ny Taobao. Raha vao nahatsikaritra izahay fa voambolana tsy azo ampiasaina ao Shina ny hoe “Ai Weiwei”, novaiko hoe Fitiavana ny solonanaran’i Ai, kanefa mbola nakaton’ireo manampahefana ihany ny tsenako. Nanontany ahy ny antony ireo namako any ivelany ka tsy haiko hoe ahoana no hanazavana azy.
Nanomboka nampiasa VPN i Wu mba hialàna amin’ilay sivana, kanefa nanasarotra io ezaka io ny teritery vaovao momba ny fampiasana VPN ao Shina. Hoy i Wu: “mila miditra ao amin’ny Twitter aho, tena ilain’ny Shinoa mpampiasa aterineto ny VPN”. “Fahasambarana be izao ny mandefa sarina saka ao amin’ny Twitter satria tsy maintsy miezaka mafy ianao. Mahatsapa ho toy ny nandresy tamin’ny antsapaka ireny ianao raha mahavita mifandray amin’ny VPN ny finday avo lentanao.”